बलात्कृत युवतीले गाउँ छाडिन्, बलात्कारीले गाउँलेलाई भोज खुवाए ! « Postpati – News For All
प्रचण्ड पक्राउ दाङ रोल्पा नेकपा प्रधानमन्त्री विप्लव नेकपा प्रधानमन्त्री ओली सल्यान उपनिर्वाचन
अमेरिकाबाट उपमेयरको प्रतिक्रिया- ‘म बिरामी छु, लुकेकी छैन’
अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश फुँयालले हेर्न नमिल्ने
ऐन बदलेर जनप्रतिनिधिलाई झन् धेरै सुविधा दिने तयारी
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान, कहाँ कस्तो रहने छ ?
ब्रुमर सफा गर्दै, टिपर धूलो झार्दै
पत्रपत्रिकाबाट पढ्न लाग्ने समय : ६ मिनेट
पुस २३, काठमाडौँ । ‘म जन्मिँदा हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो भने अब्बाले मलाई स्कुल पठाउनुहुन्थ्यो,’ घरभन्दा निकै पर काठमाडौं सहरमा बसेर बुबाको न्यानो मायाबारे सुनाउँदा उनको आँखाबाट तातो आँसु बगिरहन्छ । त्यतिखेरको अवस्था राम्रो थिएन, घरकी जेठी छोरी उनले पढ्न पाइनन् । नेपालगन्ज वनघुस्राकी २२ वर्षीया नग्मा (परिवर्तित नाम) को पढ्ने रहर त्यत्तिकै हरायो ।
नग्माको ढुकढुकी झन्झन् बढ्दै गयो । साई र नाउले संकेत गरेको त्यो उतै भारतको रुपैडिया रहेछ, उनीहरूले मोटरसाइकलको बीचमा नग्मालाई राखे । पिप्रहवा गाउँ हुँदै रुपैडिया र रुपैडियाबाट अरू दुई पुरुषले दिल्ली पुर्‍याए । रुपैडिया हुँदै दिल्ली पुग्दासम्मको घटना उनको स्मरणमा छैन । किनभने उनीहरूले दिएको बिस्कुट र जुस खाएपछि नग्मा बेहोस भएकी थिइन् । उनी जब होसमा आइन्, ती दुई पुरुषले आफूलाई निर्वस्त्र पारेर खिचेको भिडियो देखिन् । आफूहरूले भनेझैं नगरे भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की ती पुरुषहरूले दिइरहेका थिए । नग्मालाई ‘इज्जत’ को डर लाग्यो । उनी ती पुरुषले जसोजसो भन्छन्, त्यसै गर्दै गइन् ।
त्यतिन्जेलसम्म नग्मालाई उनका गाउँले निजामुद्दिन र मुबारकले एक लाख भारतीय रुपैयाँमा बेचिसकेका थिए । ती अन्जान दुई पुरुषले उनलाई एकजना महिलामात्रै भएको नयाँदिल्लीको एउटा कोठामा पुर्‍याए । पालैपालो बलात्कार गरे । त्यतिखेर उनीहरूले नजामुद्दिनसँग गरेको कुराकानी अहिले पनि उनको दिमागमा झनझनाइरहन्छ । ‘उसको घरमा फिरौतीको कुरा भइरहेको छ, मिल्छ कि मिल्दैन तर अहिले नै त्यसै नछोड्नू,’ यताबाट फोनमा गएको आवाज उनले प्रस्ट सुनिन् । यो कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जले गरेको कल डिटेल्स अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यतिखेर उनले जे भोगिन्, अहिलेको बयानबाट अनुमान गर्न सकिँदैन । ती दुई पुरुषले उनलाई कोठामै छाडे, बाहिरिए ।
जिल्ला अदालतको यो गत मंसिर १७ गतेको आदेश थियो । न्याय सही ट्र्याकमा गइरहेको थियो । नग्मा र उनको परिवारलाई अदालतमाथि भरोसा बढिरहेको थियो । कात्तिक १३ देखि १७ गतेसम्मको त्यो अँध्यारो दिन बिर्सिन नग्मालाई परिवारका सदस्यहरूले भरपुर साथ दिइरहेका थिए । घटनाको मिसिल र पीडकको अपराधलाई आधार मान्ने हो भने यो कम्तीमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने घटना हो । तर जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पीडक पक्ष उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा पुग्यो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र ऋषिप्रसाद अधिकारीले जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत पनि मागेका हुन् । घटना पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पुस १० गतेको उनीहरूको इजलासले पीडकलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गर्ने आदेश गर्‍यो । ‘पीडितको नामको घाउजाँच फारमबाट केही घाउखत नदेखिएको र डकैती गरिएको भनिएको सामान बरामद नभएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । निजामुद्दिन र मुबारक एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त भए ।
दुःख त नग्मालाई श्रीमान्सँग पनि लागेको छ किनभने उच्च अदालतको आदेश आउनेबित्तिकै उनी टाढिए । गाउँ छउन्जेल के छ कसो छ भनेर सोध्दा पनि सोधेनन्, काठमाडौं आएपछि फोनसम्म पनि गरेका छैनन् । ठ्याक्कै गाउँले र छरछिमेकीझैं गरी टाढिए उनका श्रीमान् । ‘मैले जानाजान केही गल्ती गरेकी छैन,’ नग्मा सुस्ताउँछिन्, ‘मेरो मन त पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै छ, थाहा छैन उसको दिलमा के छ !’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२०७६ पुष २३,बुधबार को दिन प्रकाशित
अमेरिकाबाट उपमेयरको प्रतिक्रिया- 'म बिरामी छु, लुकेकी छैन'
ओली प्रचण्ड र देउवाको भेटवार्ता, के भयो छलफल ?
ललिता निवास प्रकरणमा को-को परे कारबाही सिफारिसमा ?
दाङकि एक महिला बेपत्ता, श्रीमानद्वारा खोजि गरिदिन आग्रह
प्रदेश ५ का सांसद पोखरेलको निधन
ट्राफिक प्रहरीले लगाइदियो प्रहरीकै गाडीमा ‘ह्विल लक’
दाङमा ससुराले गरे बुहारीलाई छुरा हानेर हत्या